उत्पादन निर्यात गर्दै नेपालको पहिलो सेनिटरी उद्योग
आयात निरुत्साहन गरी स्वदेशी उद्योग बचाउन माग
विराटनगर । १४ वर्षअघि स्थापना भएको नेपालकै पहिलो सेनिटरी उद्योग जस्मिन हाइजिनले भारतसहित विभिन्न मुलुकमा आफ्नो उत्पादन निर्यात गर्दै आएको छ । उद्योगले अफ्रिकी र अमेरिकी समेत गरी आठओटा मुलुकमा नेपाली उत्पादन पठाउँदै आएको छ ।
नेपालमा विराटनगरको अलावा बुटवलमा पनि सेनिटरी उत्पादन गर्ने अर्काे उद्योग छ । तर पछिल्लो समय बहुराष्ट्रिय कम्पनीको आक्रामक बजार विस्तार र अवैध रूपमा हुने आयातका कारण यस्ता उद्योग समस्यामा परेका छन् । भारतीय लगायत विदेशी कम्पनीका सेनिटरी उत्पादन भन्सार छलेर आएपछि स्थानीय उत्पादनलाई बजारमा टिक्न मुश्किल भएको जस्मिन हाइजिनका सञ्चालक पुनीत शारडाले बताए ।
उक्त उद्योगले सामाजिक दायित्व अन्तर्गत विराटनगरका विद्यालयका छात्राहरूलाई सेनिटरी प्याड वितरण गर्दै आएको छ । तर स्थानीय तहले विद्यालयका छात्रालाई वितरण गर्ने सेनिटरी प्याड विदेशी हुने गरेकाले स्थानीय उत्पादनको उपेक्षा गरिएको उनको गुनासो छ । ‘मल्टिनेशनल कम्पनीले सामाजिक दायित्व पनि निर्वाह गर्दैनन्,’ उनले भने, ‘आक्रामक विज्ञापन गरेर उनीहरूले बजार ओगटेका छन् ।’
सरकारले नेपालका सेनिटरी उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्न कच्चापदार्थमा छूटको व्यवस्था र बहुराष्ट्रिय कम्पनीका तयारी वस्तुमा १५ प्रतिशतबाट ३० प्रतिशत कर निर्धारण गर्नुपर्ने सञ्चालक शारडाले बताए । वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने उद्योगलाई बचाउन आयात निरुत्साहन गर्ने नीति सरकारले ल्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
उक्त उद्योगबाट आर्थिक वर्ष २०७५/२०७६ मा रू. १ करोड ८० लाखको सेनिटरी प्याड, नेकपिन, नेकपिन लाइनर, डाइपर लगायत निर्यात भएको थियो । यही वर्ष विभिन्न मल्टिनेशनल कम्पनीका ६ करोड ३६ लाख बराबरको सेनिटरी लगायत सामग्रीको आयात भएको छ, जसबाट १ करोड ९३ लाख राजस्व संकलन भएको तथ्यांक छ ।
यस्तै आर्थिक वर्ष २०७६/२०७७ मा नेपालबाट रू. १ करोड ९ लाख ९७ हजार बराबरको सेनिटरी प्याड, नेकपिन र डाइपर निर्यात भएको थियो भने ६ करोड ४७ लाख बरारको आयात भएको थियो । यसबाट १ करोड ९९ लाखको राजस्व संकलन भएको थियो ।
लकडाउन, निषेधाज्ञा लगायत कारण चालू आवको शुरुआती महीनामा नेपालबाट सेनिटरीको निकासी घटेको छ । साउनयता रू. २ लाख २६ हजार बराबरको मात्र निकासी भएको छ भने ५ करोड ६ लाख ८१ हजारको आयात भएको छ, जसबाट १ करोड ५१ लाखको राजस्व संकलन भएको विराटनगर भन्सार कार्यालयले बताएको छ ।
अघिल्ला वर्षहरूमा वार्षिक रूपमा आयात हुने परिमाण बराबर योपटक २ महीनाभित्रै आयात भएको छ । लकडाउनका कारण बजारमा अभाव हुने भएकाले व्यवसायीले एकैपटक धेरै सामग्री आयात गरेको हुन सक्ने भन्सार प्रमुख शिव भण्डारीले बताएका छन् ।
सुनसरी–मोरङ औद्योगिक कोरिडोर : उद्योग पूर्ण क्षमतामा नचल्दा रोजगारी गुमाउँदै मजदूर[२०७७ भदौ, ३०]
ओरालोमा जुट निकासी : १६ अर्ब रुपैयाँको जुट निकासी ६ अर्बमा खुम्चियो[२०७७ भदौ, २९]
खुुद्रा व्यापारी भन्छन् : यतिका दिन ऋण काढेर जीवन चलाउँदै छौं [२०७७ भदौ, २६]
उत्पादन निर्यात गर्दै नेपालको पहिलो सेनिटरी उद्योग[२०७७ भदौ, २५]